Qiimaha la iibiyo saacadda iyo faraantiga uu wato amiirka A-Shabaab? | Hadalsame Media
Home Wararka Qiimaha la iibiyo saacadda iyo faraantiga uu wato amiirka A-Shabaab?
Qiimaha la iibiyo saacadda iyo faraantiga uu wato amiirka A-Shabaab?
(Hadalsame) 06 Nof 2019 – Hogaamiyaha ururka Al-Shabaab, Axmed Diiriye Cumar [Abuu Cubeyda] ayaa markii ugu horeysay waxaa lagu arkay muuqaal dheer oo ay baahisay kooxdiisa gacansaarka la leh shabakadda Al-Qaacida.
Fariintiisa oo si toos ah ugu socotay shacabka Mareykanka ee canshuurta ku taageera ciidamadooda ayaa wuxuu u sheegayaan “in ay dib eegis ku sameeyaan halka iyo qaabka ay ku baxdo lacagahooda”.
Previous articleCiidamadii Cabdi Janan oo aad u hubaysan ayaa la sheegay inay ku biireen kuwa Xoogga Dalka + Sawirro
Next article“Gacaliso, waan jeclahay rootiga gubtay!” – Waxaan sugayay inuu aabbe xanaaqi doono!